West Africa ekwesighi ka ama ya dika ebe ndi eyi ọha egwu; Ghana gbara Nigeria ume ka o kpochapu iyi ọha egwu
Politics Nwere ike 28, 2021
Onyeisiala Nana Akufo-Addo nke Ghana agwala onyeisiala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari na ndị isi ECOWAS ndị ọzọ ka ha kpochapụ iyi ọha egwu, na-ekwusi ike na ọdịda anyanwụ Afrịka ekwesighi ka ndị eyi ọha egwu.
Mazị Akufo-Addo kpọrọ oku n'okwu mmeghe ya n'oge nnọkọ pụrụ iche nke nzuko omeiwu ECOWAS n'afọ 2021 iji kwado mpaghara mpaghara agha maka nchekwa, ọchịchị onye kwuo uche ya, nkwụsi ike na mgbake akụ na ụba.
Onye isi ala Ghana kwuru na agbanyeghị mbọ ndị isi ECOWAS gbalịsiri ike ịlụ ọgụ maka iyi egwu ahụ, a gbara mbọ na-achọ ọgbaghara ọtụtụ mba ndị otu ECOWAS.
O hotara mwakpo na akara ala, ndị nkịtị, na ndị agha na Niger, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, na Nigeria dị ka ihe atụ.
Mazi Akufo-Addo kwukwara, “Anyi ekwesighi ka ugwu a too anyi, anyi aghaghi iji aka anyi mee ngwa ngwa igbanwe akuko a.
Ọ gbakwụnyere na ịnọgide na-enwe udo na nchekwa, na ichekwa ụlọ ọchịchị onye kwuo uche ya, bụ nnukwu ihe ịma aka nye mpaghara ahụ ugbu a.
“Anyị enweghị ike imesi ike otu udo na nkwụsi ike dị mkpa maka uto na mmepe nke mpaghara anyị. Mr Akuffo-Addo kwuru na ọ dị oke mkpa na anyị ga-agbusi mbọ ike ikpochapụ iyi ọha egwu na iyi ọha egwu na West Africa.
Ewezuga eziokwu ahụ bụ na ndị mpaghara ahụ na-atụ ụjọ mgbe niile maka enweghị nchekwa, Maazị Akuffo-Addo kwukwara, mpaghara ahụ enweghị ike ịtụ anya ịdọrọ ọkwa nke ego achọrọ ma ọ bụrụ na ọnọdụ enweghị ntụkwasị obi na-adịgide.
O kwusiri ike mkpa ọ dị mpaghara mpaghara ECOWAS ka ọ gbasie ike na mbọ ya ịhazi ihe aga-eme iji kwụsị iyi ọha egwu na mpaghara ahụ.
Mazị Akufo-Addo kwukwara na mpaghara ahụ ga-etinye anya nha anya iji kpochapụ enweghị nchekwa n'ọwara mmiri nke Ọwara Gulf nke Guinea, nke bụ ugbu a mba kachasị ukwuu nke paireti.
Ka ọ dị ugbu a, Onyeisiala Muhammadu Buhari nwere nzukọ mechiri emechi na Mr Akufo-Addo na Presidential Villa dị na Abuja na-eso nzukọ ECOWAS.
Ogbenye nwere ike iduga gị ikwere na enyi nwoke anaghị enye gị ego anaghị ahụ gị n'anya n'ezie - Nwoke dere Nwere ike 28, 2021
South Korea na-agwa Naịjirịa na ọ chọghị enyemaka mba ụwa iji dozie enweghị nchekwa Nwere ike 10, 2021
"Nwanyị nwere akụ na ụba nke na-enweghị nwoke n'akụkụ ya dị ka di, abaghị uru ọ bụla." Uche Ebere katọrọ Toke Makinwa mgbe ọ tachara tweet gbasara mkpa ọ dị ya maka agụụ Nwere ike 4, 2021
UK nyere ndị otu IPOB ndị na-eyi ọha egwu mgbapu na-emebi nchekwa nke Nigeria: FG April 20, 2021
Mwakpo ndị a na-amaghị ama nke ndị agha na-egosi ọrụ ndị na-eyi ọha egwu na South-East, ka Gọvanọ Ikpeazu si kwuo Nwere ike 31, 2021
Mkpebi-eyi ọha egwu: planesgbọ elu Tucano dị nde $ 493 nke Naịjirịa nwere oke ogbunigwe na egbe igwe dị njikere maka ọgụ Nwere ike 2, 2021
Onye na-eme ihe nkiri Ghana bụ Akuapem Poloo nyere 80,000 Cedis Bail site n’ụlọ ikpe ukwu dị na Accra April 21, 2021
Tags:uwaa, nzukọ ndị omeiwu ecowas